NA NLEKOTA ỌHỤRỤ MAKA FIFA 19, ONYE NCHEBE PETER CECH AGAGHỊZI ABỊA NA MKPARỊTA ỤKA NA OKPU AGHA AHỤ - AKỤKỌ - 2019
EA tọhapụrụ ya maka akara FIFA 19, nke mere mgbanwe ọ bụghị naanị na egwuregwu ahụ, kamakwa edozire nghọtahie nke ghọworo otu meme.
Dika onye na-egwu egwu nke afo iri abuo, Petr Cech, nke na-egwu egwu ugbu a na Arsenal na London, amaghi maka nani oru ogwu ya, kamakwa maka ọdịdị ya: mgbe enwere nnukwu mmerụ n'afọ 2006, Cech na-eburu ubi ahụ na okpu agha.
Dị ka ọ dị, dị ka ndị na-eme egwuregwu simula, a na-egosipụta Cech na okpu agha. Ma na FIFA 19, ndị mmepe ahụ gafere n'elu ala, na-egosipụta onye nlekọta nchịkọta Czech nke nwere okpu agha na, ọzọkwa, na-eyi uwe mgbe a na-eme mkparịta ụka. Czech chọpụtakwara nke a, na-ekenye nseta ihuenyo kwesịrị ekwesị na Twitter. "Ọ bụghị eziokwu, ụmụ okorobịa ... m ga-etinye nkedo!" - dere Czech.
Na nso nso a, ndị mmepe edoziwo nsogbu a: ugbu a Cech na-abịa mkparịta ụka n'enweghị okpu agha ... na uwe. "Anyị weere ya agbụ," - - nkọwa nke nkedo ahụ.